पढेको, सुनेको, देखेको लामो समयसम्म जस्ताकोतस्तै सम्झिने बनाउने यी ७ अचुक उपाय | Lek Besika Bhakaharu - Online News Portal
पढेको, सुनेको, देखेको लामो समयसम्म जस्ताकोतस्तै सम्झिने बनाउने यी ७ अचुक उपाय
पढेको विषय स्मरणमा रहँदैन ? वा धेरै पहिले देखेका व्यक्तिहरु, कुनै विषयमा सुनेको जानकारी केही बर्षपछि विर्सिसक्नुहुन्छ भने आज हामी तपाईलाई त्यो पिडाबाट छुटकारा दिँदैछौ । कुनै परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ ।
विभिन्न जारी वा प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपनि पढेको अधिकांश सम्झिनसक्ने बन्नेगरी आज हामी उपाय दिँदै छौ । आफ्नो स्मरण शक्ति बढाउन नचाहने व्यक्ति सयदै कमै होलान् । सबैले आफ्नो स्मरण शक्ति बढाउन चाहन्छन् ।
स्मरण शक्तिलाई हामीले बिभिन्न तरिकाहरु अपनाएर बढाउन सक्छौँ । हामीले स्मरण शक्ति बढाउने तल उल्लेखित कुराहरु लेखिरहँदा तपाईलाई ह्या यस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्ला । तर बास्तवमा हो त्यस्तै । तिनै बिषयलाई जोड दिने हो भने स्मरण शक्तिमा सुधार हुन्छ । हामीले केही त्यस्ता बिषयहरु उल्लेख गरेका छौँ ।
१, दोहो¥याउने कुनै चिजलाई मनमनै दोहो¥याएमा त्यसलाई सम्झन सजिलो हुन्छ । साथै कुनै पनि कुरालाई कागजमा निरन्तर लेखेर पनि स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट लेखिएका शब्द स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ ।
२, विषयलाई जोड्ने तपाई सिकिरहनुभएको कुरालाई पूरानो कुरासंग जोड्न सिक्नुहोस् । जसले तपाईंलाई दुवै कुराका बारेमा आवश्यक कुराहरु सम्झन सजिलो हुनेछ ।
३, नौलो तरिका अपनाउने यदि तपाईं केही कुरा याद गर्न चाहनु हुन्छ भने नौँलो तरिका अपनाउनुहोस् । तपाईलाई एउटा उदाहरण भनौँ । तपाईं नौवटा ग्रहको नाम सम्झने प्रयास गरिरहनुभएको छ भने ‘माइ भेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नाइन प्लानेट’ को तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ । यसमा हरेक शब्दको पहिलो अक्षरबाट ग्रहको नाम आउँछ । नभए तपाईँले सूत्रबद्ध रुपमा पनि शब्द सम्झन सक्नुहुन्छ ।
४, कार्डमा लेख्ने तपाईले केही महत्वपूर्ण कुरा सम्झि राख्नु पर्ने छ भने त्यसलाई फ्लायस कार्डमा लेख्न सक्नु हुन्छ । जब तपाईंलाई आवश्यक पर्नेछ, त्यो कार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ ।
५, गाउने र स्मरण शक्ति बढाउने तपाई कुनै कुरालाई स्मरणमा राख्न चाहनु हुन्छ भने आफ्नो मनपर्ने गितको धुनमा त्यस चिजलाई सेट गर्नुहोस् । यसबाट तपाईंले कुनै पनि कुरा लामो समयसम्म याद गर्नसक्नुहुनेछ ।
६, पढेको कुरालाई महसुस गर्ने आफुले पढेको कुरालाई मष्तिष्कमा एक तस्विर बनाउने प्रयास गर्नु पर्छ । यसबाट तपाईं चिजलाई लामो समयसम्म याद राख्न सक्नुहुन्छ । पढिरहेको बेलामा ती शब्दका बारेमा सोच्न सुरु गर्ने । कल्पना गर्ने ।
७, उदाहरण दिने मानिसले आफ्नो मष्तिष्क आफ्नो जीवनकालमा मुस्किलले ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्न सक्छ भनिन्छ । बाँकी भाग प्रयोग गर्न सक्दैन् । त्यसैले ती बाँकी भाग पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गर्ने । कुनै याद गर्नु पर्ने बस्तुलाई उदाहरण बनाएर याद गर्नुहोस् ।
तिहार र मिठाईको कुराः स्वास्थ्यका खातिर यसरी चलाखी गर्ने कि ?
यसकारण हुने रहेछ शुक्रबार कण्डमको दोब्बर विक्री ?आयो सनसनीपूर्ण रिपोर्ट